Umsebenzi oyinhloko we amafutha engine - ukuhlinzeka ngomshikisho omncane yenjini ezihambayo izingxenye. Njengoba imoto izinjini isebenze phezu ebanzi kakhulu lokushisa ububanzi, ukudala ukuphila kube mnandi kuphela ukuthi kuzoqinisekisa lusebenze ngaphansi kwazo zonke izimo ezisebenza, akunakwenzeka. Ngenxa abakhiqizi injini sokunquma grade amafutha afanelekile kakhulu ukuthi ahlinzeke aphakeme kahle kungenzeka ne okungenani kungenzeka bafake izingxenye ngaphansi kwezimo ezithile ukusebenza kwe-motor. Kukhona division of the mnandi kwi "ihlobo" futhi "ebusika ', okuyinto kuhluke ikakhulukazi viscosity.
Uma sikubeka kalula, viscosity lamafutha injini ephawula ikhono layo ukuhlala phezu workpiece, ngenkathi sigcina fluidity. Lokhu yenani akulona njalo futhi incike lokushisa. Kahle wacosha viscosity amafutha engine uyakwazi ukunweba ukuphila inkonzo motor. Ukukhetha olungalungile ukuphila kube mnandi kuphela kuholela nisebancane injini bafake. Ukuze bakwazi ngandlela-thile uzulazule uhla zokugcoba, ngezigaba yasungulwa. Ngokwe GOST Russian bahlukene ku:
Ngoba bonke amakilasi kuchazwe viscosity kinematic at 100 ° C, futhi for the nobusika futhi ngezinye 18 ° C. Emazweni eziningi zomhlaba lasemukela lesi Sae ngezigaba, lakhiwa-American Society avtoinzhenerov.
Kukholakala ukuthi ayanda ephezulu lokushisa viscosity amafutha engine, ngcono. Lokhu akulona iqiniso. Futhi nakuba imoto yezemidlalo Kunconywa ukusebenzisa okusezingeni eliphezulu viscosity Inkomba amafutha engine, akusho ukuthi injini yakho bay in a amafutha viscous, uyokwenza kusukela yemoto super ezemidlalo imoto. Motor ngeke lusebenze kangcono. Kwenzeka abasebenzela: injini uzoshesha ulahlekelwa amandla kuzodinga ukulungiswa ezinkulu noma esikhundleni.
Encwadini inkonzo iqukethe ofanele kakhulu amafutha kwawenu motor viscosity injini. Ekunqumeni lokhu ipharamitha, abakhiqizi acabangele zonke izindlela kungenzeka ukusebenza injini nazo zonke ephezulu ijubane layo uma igijima izindlela. Ngoba kubonisa nemingcele elilungile kakhulu viscosity.
Ukusebenzisa amafutha ezedlula ngaphezulu noma ngaphansi-ukusebenza viscosity kuyingozi injini. Ngezinye injini ongaphakeme kungacinanisa viscosity, futhi ngesilinganiso esingafani okusezingeni eliphezulu ke njalo esebenza at okushisa ephakeme (ngoba friction lenyuke), okuyinto ngesivinini ukugqoka. Ngaphezu kwalokho, amazinga okushisa aphakeme ibe nomthelela ekubeni namachibi uwoyela ngokushesha, okusho ukuthi udinga ukushintsha ke kaningi. Ukusetshenziswa ephezulu viscosity igrisi akunjalo ngokushesha ezithinta ukusebenza injini. Kodwa lokho okuzokwenzeka - ncamashi. Ngakho-ke, esiteshini zidinga uthele amafutha ngokuvumelana nezincomo yomenzi, kungakhathaliseki okushoyo izisebenzi zayo: kuyazuzisa kokuphela sewaranti, wena kwalungisa imoto yakho kaningi ngangokunokwenzeka. Nakekela imoto yakho ngokwakho.
Modern motor amafutha brand silondoloze Ukusebenza 500-2000 amahora wokusebenza injini, okungukuthi ayizinkulungwane 12-45 amakhilomitha. Ukushintshwa igrisi Kuyothi kanyekanye ne ushintsho ukuhlunga futhi yesondlo imoto. Kulokhu, lo okuqhubekayo izinga injini operation zizonikezwa (enikeziwe ukusetshenziswa nomkhiqizi umkhiqizo Kunconywa).